Masìna ianao, manaraka ny toro-lalana etsy ambany mba télécharger ny fampahavitrihana malalaka manaova ny RescuePRO® rindrambaiko:
1. Ity ambany ity azafady mifidy izay no raisina amin'ny tapakila ny SanDisk Extreme karatra.
>>>>Soso-kevitra: Ny tapakila dia na hoe RescuePRO® na RescuePRO® Deluxe, misafidy mifanaraka amin'izany.Raha manana RescuePRO® SSD tapakila, KITIHO ETO2. Masìna ianao, misafidy iray amin'ireo bokotra etsy ambany noho ny tapakila voafidy izay mifanitsy ny rafitra miasa.3. Mba hamerina ny LC Tech Guide Activation Process noho ny toromarika ao amin'ny fehezan-dalàna ny fahazoana mampiasa ny fampahavitrihana ny RPRID serial isa.** aza hadino fa: Should you have a coupon for RescuePro Deluxe with a serial number that begins with RPRID-0305,
you should contact SanDisk at Sokajy://www.sandisk.com/about-sandisk/contact-us/ for a correct serial number.
Ny serial isa izay pirinty amin'ny tapakila dia niala aina sy Diso.You will then need to provide your complete RPRID-0305 serial isa ny SanDisk mba handray ny fanoloana. **
Raha nahazo tapakila amin'ny SanDisk® SSD maimaimpoana 1 taona fampahavitrihana ny RescuePRO Deluxe for SSD, azafady manaraka ny toro-lalana etsy ambany mba télécharger ny afaka 1-taona fampahavitrihana manaova ny RescuePRO® Deluxe for SSD rindrambaiko:
>>>>Soso-kevitra: Ny tapakila ao hilaza hoe RescuePRO® Deluxe.2. Masìna ianao, misafidy iray amin'ireo bokotra etsy ambany noho ny tapakila voafidy izay mifanitsy ny rafitra miasa.3. Mba hamerina ny LC Tech Guide Activation Process noho ny toromarika ao amin'ny fehezan-dalàna ny fahazoana mampiasa ny fampahavitrihana ny RPSSD serial isa.** aza hadino fa: Should you have a coupon for RescuePro Deluxe for SSD with a serial number that begins with RPDLX-0602,
Raha mampiasa Windows XP, KITIHO ETO ho XP mifanaraka boky RescuePRO® Standard na KITIHO ETO ho XP mifanaraka boky RescuePRO® Deluxe.
Mba mametraka ny rindrankajy eo amin'ny solosaina, ary rehefa mihazakazaka izany voalohany, you will then be prompted to activate your software. Avy eo dia homena ny rohy mankany amin'ny fampahavitrihana pejy. Mba araho ilay rohy ary fenoy amin'ny endrika, Aza adino ny mampiditra ny serial isa hampavitrika ny maimaim-poana ny RescuePRO® rindrambaiko. Tsindrio eto ho dingana-by-dingana mpitarika ny fampahavitrihana.